Mampiasa Tabilao Fampirantiana 165 000 Mahery ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Basque Catalan Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Galoà Grika Groenlandey Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Mixe Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal
Ny fitoriana isan-trano no tena ahafantarana ny Vavolombelon’i Jehovah. Hita mitory eny amin’ny toerana be olona koa izy ireo izao, miaraka amin’ny tabilao fampirantiana tsara tarehy.
Nasongadina bebe kokoa io fomba fitory io tato ho ato. Nanomboka nampiasa latabatra sy tabilao fampirantiana ny Vavolombelona, any New York, tamin’ny Novambra 2011 mba hampahafantarana ny olona izay lazain’ny Baiboly. Nahomby ilay ezaka ka tsy ela dia nanao an’ilay izy koa ny tany amin’ny tanàna hafa.
Tabilao 165 390 no efa nalefa tany amin’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany tamin’ny Martsa 2015. Nahazo latabatra sy tranoheva ary kioska an’arivony koa izy ireo.
Mbola ny fitoriana isan-trano no fomba lehibe indrindra ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hampahafantarana ny fahamarinana ara-baiboly. Hita koa anefa hoe nahomby ny fampiasana ny tabilao fampirantiana. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Mipetraka any Peroa i Raul. Nahita Vavolombelon’i Jehovah teo akaikin’ny tabilao fampirantiana iray izy, dia nanatona azy ireo. Hoy izy: “Taiza foana ianareo? Efa telo taona aho izay no nitady anareo. Nisaotra an’Andriamanitra aho raha vao nahita ny tabilaonareo.”
Mitory matetika ao amin’ny faritra misy an’i Raul ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy tratra an-trano mihitsy anefa izy na amin’ny andavanandro na amin’ny faran’ny herinandro. Nilaza i Raul fa efa nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelona izy taloha, ary te hanohy an’ilay izy. Natao àry ny fandaharana mba hahafahany hanao an’izany.
Nisy mpivady tanora iray any Boligaria, naka an’ilay boky hoe Ny Tsiambaratelon’ny Fahasambaram-pianakaviana, teo amin’ny latabatra fampirantiana iray. Niverina indray izy ireo ny herinandro nanaraka, ary naka an’ilay boky hoe Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly sy ilay hoe Mianara Amin’ilay Mpampianatra Lehibe. Nanontanian’ilay Vavolombelona nijoro teo izy mivady hoe firy ny zanany. Namaly izy ireo hoe: “Mbola tsisy aloha izao, fa rehefa manana izahay dia tianay hampianarina momba an’Andriamanitra ry zareo. Ireto boky ireto mihitsy no ilainay.”
Nanatona an’ireo Vavolombelona teo amin’ny latabatra fampirantiana iray koa ny lehilahy iray mipetraka any Ukraine. Nanao fanamiana miaramila izy. Hoy izy: “Fa rahoviana ry zareo no ho tonga ny Hara-magedona?” Nandray anjara tamin’ny ady nitranga vao haingana tany Ukraine ilay lehilahy. Resy lahatra izy fa hitranga tsy ho ela ny Hara-magedona rehefa jerena ny zava-misy eran-tany. Lasa saina anefa izy hoe nahoana Andriamanitra no mbola tsy nanao zavatra. Nampiasa Baiboly ireo mpitory mba hanazavana taminy hoe misy antony matoa Andriamanitra mbola miandry kely, ary tsy ho ela izy dia handringana ny ratsy fanahy. Nandray ilay rangahy rehefa nomena ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! sy ilay boky hoe Misy Mpamorona Iray Miahy Anao Ve?
Mipetraka any Macédoine kosa ny tovolahy iray. Nilaza tamin’ireo Vavolombelona teo akaikin’ny latabatra fampirantiana iray izy hoe mpamaky ny gazetin’izy ireo. Ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? indray no tiany ho azo. Handeha ho any amin’ny tranomboky, hono, izy dia hamaky an’ilay izy.
Niverina teo amin’ireo Vavolombelona ilay tovolahy rehefa afaka adiny roa teo ho eo. Efa voavakiny hatreo amin’ny pejy 79 ilay boky. Hoy izy: “Manova olona ity boky ity. Hay diso ny ankamaroan’ny zavatra ninoako! Hitako hoe mitombina daholo ny fanazavana ato. Nanova tanteraka ny zavatra fantatro momba ny fiainana izy ity.”
Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly?
Olona an-tapitrisany eran-tany no mianatra Baiboly ka mahita ny valin’ireo fanontaniana lehibe eo amin’ny fiainana. Te hahazo ny valin’ireo fanontanianao koa ve ianao?
Jereo hoe nahoana izahay no tsy mitovy amin’ny fivavahana hafa antsoina hoe Kristianina.
Tonga Nijery ny Armada Ireo Tia Fahafahana
Video: Vavolombelon’i Jehovah any Manhattan